Shirweyne ay iskugu yimaadeen qurba joogta reer Hiiraan oo ka dhacay magalda London oo aan looga soo qeyb galin sidii la rabay kedib.
Posted by admin on July 27 2011 14:06:03
London: Shir labo maalmood ka socday London ayna iskugu yimaadeen qaar ka mid ah qurbo joogta reer Hiiraan ayaan looga soo qeyb galin sidii la qiyaasayey shirkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen urur la yiraahdo ururka midnimada Hiiraan, inkasta oo magacaasi dhawr maalmood ka hor laga diiwaan galiyey inuu yahay urur samafal ah dalka Mareykanka iyo UK.war bixin
London:-Shirweyne abaabulkiisa uu ka soo bilaawday reer Hiiraan ma tahay amaba gaari waligaa ma ku martay kedibna isku bedelay mid siyaasadeed ayaa ugu danbeyn markii ay cabasho ka keeneen mid ka mid ah beelaha reer Hiiraan ugu waaweyn loo xaqii jiyey in ururkaani samafal yahay. sidoo kale intii uu socday abaabulkan shirkani ayaa waxaa ka dhacay is qabqabsi fara badan markii leysku mari waayey in ururku noqdo inuu yahay samafal iyo in laga dhigo mid siyaasadeed.
Abaabulayaashii shirkaan amaba maskaxdii ka danbeysay inuu qabsoomo ayaa waxaa ka mid ahaa C/qadir Xaaji Masale iyo Ciise Turabi oo ah aabaha dhalay suxufiyada Somaliyeed ee u shaqeysa BBC Kaati Ciise. fikirka oo markii hore ku bilaawday sida la sheegay in la heshiisiinayo beelaha reer Hiiraan oo ay colaadi ka dhaxeyso iyadooba qaarkood magacooda la xusay ayaa ugu danbeyn lagu balamay bal in marka hore la helo magac mideeya dadka fikirkaan lahaa iyo kuwa gadaal ka imaan doona kedibna waxaa la sameeyey magaca ururka Midnimada Hiiraan Mideeye iyadoo shirar kalena loogu balabay in lagu qabto dhawr meelood oo dunida ka tirsan.
Shirkan oo ahaa mid ay iskugu imaanayeen reer Hiiraanka ku nool Yurub laguna qabanayey magaalada London oo ay ku nool yahiin reer Hiiraanka ugu badan ayaa waxaa loo diyaariyey goob ku haboon shirarka oo qaadeysa ugu yarsaan ilaa 300 oo qofood nasiib wanaag shirka oo socday labo maalmood waxaa maalintii 1aad yimid dad lagu qiyaasay 37 qofood oo aanu magacyadooda ku soo qaadan doono qoraalkeena danbe. sidoo kale maalintii labaad oo aheyd maalin ay dadku badankood shaqeeyaan ayaa waxaa goobta tagay tiro aad ugu yar tiradii hore oo lagu qiyaasay 17 qofood waana kuwa qodobada shirka go,aankooda lahaa.
Mudadii uu shirku socday isla markii ay qaar ka mid ah qaban qaabiyashii shirka ka dhawaajiyeen in uu yahay urur samafal ah amaba uusan aheyn mid siyaasadeed waxaa durbaba laga diiwaan galiyey dhawr wadan marka rasmiyan magaca ururkaasi waxuu qaatay samafal sida warar lagu kalsoon yahay iyo dadkii diiwaan galiyey naga soo gaaraya. laakinse walaalaha shiray waxaa laga yaabaa iney magaca ururukaas ku diiwaan galiyaan magac aan aheyn midka ay dadka u soo bandhigeen.
Hadaba waa guul u soo hoyatay in reer Hiiraan ay dhinackasta ka shiraan iyadoo waxkasta lagu saleynayo sidii loo hormarin lahaa bulshada.Dadkii shirka ka qudbeeneyey intooda badan waxey ka dhawaajiyeen in ay Hiiraan ugu danbeysay 21 sano ka hor midkastana waxuu qiray in guryahooda laga heysto, mid ka mid ah dumarkii halkaasi ka hadashay ayaa tiri aabahey waxuu ku barbaaray Hiiraan anigane waxaan ku dhashay Hiiraan gurigii aanu laheyna ma tagi karno waa leyga heystaa haweeneydaasi dhawr maalmood ka hor inta aysan shirka reer Hiiraan imaan waxey magaalada London ka dhistay maamul goboleed ay leeyahiin degaanka uu aabaheed ku dhashay (C State). Intaasi ka dib waxaa si rasmi ah looga dhawaajiyey in aysan aqoonsaneyn maamulada sheegta Hiiraan inkasta oo ay carabka ka ilaaliyeen magaca hadane waxey ula jeedeen Hiiraan State iyo mucaaradkeeda.mudo kedib waxaa cod baahiyaha qabsaday nin dhalinyaro ah markuu arkey sidey wax u socdaan iyo sida hadalka loogu durayo beelaha reer Hiiraan qaarkood waxuuna yiri adeerayaalow ninkasta dhulka uu ka soo jeedo dib ha ugu laabto kedibna shirkii ayaa laga bixiyey waxaanu ninkaasi dhalinyarada ah ka soo diyaarin doonaa wareysi arintaasi la xariirta. hadaba qodobadii laga soo saaray shirka hoos ka aqri waxaa dadka mideeynayo waa dadkii ku qudbeeynayey in guryahooda laga heysto cida ay doonayaan iney mideeyaane waa kuwa lagu tilmaamay iney heystaan guryaha.
1- In ay u hawl galaan sidii bulshada Hiiraan loo nabadeyn lahaa,la isugu soo dumi lahaa si loo dhammeeyo khilaafka iyo shakiga aafeeyey bulshada ee beelaha u dhaxeeya. 2- In ay Nabadeynta ka billaabato Qurbajoogta oo ah ra’sumaalka Hiiraan si loo soo celiyo kalsoonidii iyo wax-wada qabsigii u dhaxeyn jiray bulshada taasoo wax badan ka tari doonta dhammeynta khilaafaadka dib u dhigay gobolka.Waxay aaminsanyihiin haddii Qurbajoogta israacdo, in ay Hiiraan israaci doonto. 3- In ay nabadeynta iyo mideynta la kaashadaan Duubabka, waxgaradka, culimada, aqoonyahanka, ururada dumarka iyo dhallinyarada. 4-In ay u hawl galaan qabashada Shirweynaha Dib U Heshiisiinta Hiiraan ee dalka gudihiisa lagu qaban doono xilliga ugu haboon. 5- In ay qabashada shirweynaha kala shaqeeyaan Duubabka, ururada iyo dhammaan bulshada Hiiraan ee dalka gudihiisa iyo dibediisa. 6- In ay ka shaqeeyaan wacyi gelinta bulshada Hiiraan, iyadoo la adeegsanayo dhammaan warbaahinta dalka iyo dibedaba lana qabanayo kulamo taxana ah oo ka dhaca dalka gudihiisa iyo dibediisa. 7- Inay iska fogeynayaan adeegsiga xooga iyo abaabullada qabiilka, iyadoo wixii khilaafaad ahna lagu xallinayo wada hadal iyo isafgarad. 8- In ay ku booriyaan dhamaan bulshada Hiiraan ka qayb qaadashada sidii bulshada la isugu soo dhaweyn lahaa, iyadoo la abuurayo jawi walaalnimo, wadatashi iyo wax wada qabsi. 9- In ay soo dhaweynayaan cid kasta ama koox kasta oo kaalin wax ku ool ah ka qaadan karta mideynta iyo kalsooni soo celinta bulshada Hiiraan. 10- In ay abuuraan guddi Heer Yurub ah oo u hawl gala hawlaha dib u heshiisiinta, mideynta iyo kalsooni soo celinta bulshada Hiiraan. 11- In ay wada shaqeyn buuxda la sameeyaan gudiyada kale ee Reer Hiiraan ee ka jira dalka gudihiisa iyo dibediisaba. 12- In ay gacan ka geystaan hawlaha samafalka iyo gurmadka ee ka ka jira Hiiraan.
Ugu danbeyn mar aanu la xariirnay qaar ka mid ah qaban qaabiyaasha shirka ayey inoo xaqiijiyeen iney aad uga xunyahiin in dadku aad u yaraa iyadoo ujeedada shirka loogu qabtay halkaasi ahaa si dad badan loo helo. hadaba filo sawirada hoolkii oo cidlo ah iyo tirada la casuumay iyo inta ka soo qeyb gashay. sidoo kale magacyada dadkii goobta ka hadlay ee iyagu ku cataabay in guryahooda laga heysto dhinaca kalena sheegay iney mideynayaan reer Hiiraan colaadi ka dhaxeyso filo goor dhaw.
Shirkiina waxuu ku soo gabo gaboobay Hiiraan waxey can ku tahay Qoonada, Beelula ayaa ka timid oo dadku waxaadba mooday mararka qarkood in Hiiraan loogu sheegay inuu ku jiro Batrool amaba Gaas oo dhawaan la soo saari doono, waa guul u soo hoyatay reer Hiiraan hadiiba jaceyl xadkaas ah loo hayo shacabka Hiiraan iyaguna masuuliyad iska saaraan iney dadka soo dhaweeyaan reer Hiiraanka laga hadlayo.